ओलीको कड्काई 'मेरो सरकार' नभनेर कस्को सरकार भन्ने त ? - NEPALI TV AUSTRALIA
NTV NPL Saturday, May 4, 2019
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार संयुक्त बैठकको संसदमा सरकारको २०७६,२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा ब्यक्त गरेको शब्द प्रति आएको आलोचनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिकृया दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारलाई ‘मेरो सरकार’ भनेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको बचाउ गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भनेर २१ पटक सम्बोधन गरेको भन्दै कांग्रेसका कार्यकर्ता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले व्यापक आलोचना गरेका छन् । उनले राष्ट्रपतिले अभिब्यक्त गरेको शब्दको बचाउ गरेका छन् । शनिबार बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएको बताएका छन् । ओलीको कड्काईमा आक्रोस समेत देखिएको स्रोत बताउछ ।
शुक्रबार संसदमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्द पटक-पटक प्रयोग गरेकी थिइन् । यो शब्दले राजाकै झल्को दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षलगायत राजनीति दलका नेताहरूले पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधनको आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस नेता गगन थापा, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आलोचना गरेका छन् । त्यस विषयमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले मेरो देश भन्छु, तपाईँको अरुको होइन भनेको हो र ? मेरो भन्ने कुराको सामूहिक अर्थमा बुझ्ने प्रयास हो । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले यो सरकार राष्ट्रपतिकै हो । त्यसैले मेरो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भन्नु भएको हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । यसअघिका राष्ट्रपतिको सम्बोधन युट्युबमा हेर्नुभयो भने पनि यस्तै भनेको देखिन्छ ।’